Puntland oo ka dalbatay Dowladda Somalia inay la safato Isbahaysiga Sucuudiga, dhabarkana xijiso Qadar. – Hornafrik Media Network
Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa Qoraal ay soo saareen Maanta waxay ku taageereen Isbahaysiga Sucuudigu hogaamiyo, iyagoona u sababeeyay in Iskaashi iyo Xiriir dhinacyo badan leh uu kala dhaxeeyo Sucuudiga iyo Imaaraadka.
Qoraalkan oo ku qornaa English ayaa lagu sheegay in iskaashi Ganacsi iyo Amni ay la leeyihiin Sucuudiga iyo Imaaraadka, taasina ay qasab ka dhigayso in Isbahaysigooda lagu afkaar noqdo. Waxayna si buuxda Puntland ugu cadaysay qoraalkeeda inay garab taagan tahay Isbahaysigaasi.
Puntland waxay Dawladda Federaalka Somalia ugu baaqday inay dib u eegis ku samayso Go’aankii dhex dhexaadnimadda ahaa ee ay ka istaagtay Xiisadda Khaliijka, iyadoona Puntland ku doodayso in go’aankaasi uu saamayn ku yeelanayo Shacabka Soomaaliyeed.
Xiisada Khaliijka ayaa soo ifbaxday Horaantii June ee Sannadkan markii Wadamada Sucuudiga, Masar, Imaaraadka, iyo Baxrayn ay xiriirka u jareen Qadar, iyagoo ku eedeeyay inay Doha taageerto Argagixisadda, Laakiin Turkiga oo Somalia saamayn wayn ku leh ayaa is barbar taagay Qadar.
Somalia ayaa tan iyo wixii ka dambeeyay Doorashaddii Madaxwayne Farmaajo ay Qadar saamayn ku yeelatay ayaa diday inay la qaadato Isbahaysigan in la go’doomiyo Qadar, Waxayna u furtay Hawadeeda inay isticmaalaan Diyaaraha Qadar. taasoo ka caraysiisay Isbahaysiga Sucuudigu hogaaminayo.
Hirshabelle oo taageertay Isbahaysiga uu hogaamiyo Sucuudigu.